Kedu ka Klout si arụ ọrụ? | Martech Zone
Onu ogugu di nkpa ọ bụrụ n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. M na nkatọ banyere Klout mana ọ masịrị m na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-anwa imepụta usoro dị mfe iji chọpụta ebe na ndị nwere mmetụta na ntanetị. Anaghị m eme ka ighota akara Klout nke ukwuu, echegbughị m banyere ya oke.
Ma… site n'oge ruo n'oge, M na-elele na na akara m Klout (na Klout iPhone ngwa ka anyị gosipụta ya!). Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmara n'ezie otu akara Klout si arụ ọrụ, lee ozi info maka gị!
Ozi nkowa mgbakwunye site OnlineDegrees.com
Tags: kloutklout akara